IHolide Cottage West Wales Nr New Quay Pool CHTOD
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguMelissa
UMelissa unezimvo eziyi-332 zezinye iindawo.
Le ndlu yeholide ibekwe kwindawo yeholide enobuhlobo kunye nosapho enezixhobo zokuzonwabisa kubandakanya ichibi langaphakathi elinomntwana osakhulayo owahlukileyo. Kukho ezinye izindlu ezi-2 kwisiza ezinokubhukishwa kunye ukulala ukuya kutsho kwi-12.
Entsha ngo-2021 kutheni ungabhuki i-massage yezemidlalo ngexesha lokuhlala kwakho nguGqirha wezeMidlalo onesidanga
IiNdawo ezi-3 zeeHolide ezifumanekayo ukuba zilale ukuya kuthi ga kwi-12 ezinendawo yokuzonwabisa kwindawo ebandakanya iPool yangaphakathi kunye nephuli yabantwana. Ifakwe kumaphandle amahle eWest Wales, kwaye kukuhamba nje okufutshane ukuya eNew Quay, eCardigan Bay apho kubonwa amahlengesi amahle e-bottlenose.
Le cottage yenye ye-3 kwi-complex ekhoyo yeholide let. Zizinja ezinobubele (ezi-2 ezincinci okanye ezi-1 eziphakathi kwe-doggies zamkelekile). Indawo ebanzi ibekwe kude nendlela ngaphakathi kwemihlaba entle eneendlela ezithandekayo zokuhamba ezisuka kwi-cottage ilungele abahambi ngokunjalo. I-complex inezindlu zangasese ezi-3 okwangoku ezifumanekayo ukuba kutheni ungazisi usapho okanye abahlobo kunye nawe. Kuyinto yodwa ukufumana ezo zixhobo zokuzonwabisa kwindawo encinci nethe cwaka, kwaye ixhamlwa kwindawo yokuqubha yangaphakathi eshushu, ichibi labantwana, iinkundla zesquash, ibha, indawo yokutyela kunye negumbi lemidlalo.
Ngaphandle, ngamabala athandekayo abanzi abandakanya ingca enkulu enika indawo eninzi yee-BBQs, ipiknikhi kunye nemidlalo yebhola. ukuze wonwabe.
*** Nceda Qaphela* Kukho intlawulo ye-£ 5.00 ye-40mins yenkundla ye-squash kunye netafile ye-tennis yetafile.
Xa usebenzisa idama lokuqubha, abantwana kufuneka bajongwe ngabantu abadala kwaye bangashiywa bodwa. Amakhefu amafutshane akhoyo kwixesha eliphambili.
Kwiziko lokuzonwabisa kukho ibha, indawo yokutyela, amadama okuqubha, inkundla yesquash, intenetya yetafile, iidati, iWi-Fi yasimahla, iiTv’s ezineSky on, iidati. Itafile ye-pool ye-50p's. Nceda Qaphela ukuba akukho Wi-Fi kwizindlu zangasese kuphela kwindawo yokuzonwabisa.
Kukwakho nenkonzo yeteksi efumanekayo kwisiza.
Nceda uqaphele kwakhona kukho iindwendwe zokuhlala kwindawo ekwenye indawo ye-cottage complex eyahlukileyo kwezi.
Umphathi uyafumaneka ekupheleni kwefowuni.
Nceda uqaphele ezi ziindlwana ezindala ke ukuba ujonge imfezeko nceda ungabhuki ezi zindlu zangasese njengoko ungafumana izinto ezinje ngeendonga ze-aly, izigcawu, kunye ne-cobwebs. Ayithethi ukuba zimdaka lonto ithetha ukuba ukwilali kwaye ungazilindela ezi zinto. Unokufumana amavumba asemaphandleni ngamaxesha athile onyaka.
Nceda uqaphele ezi ziindlwana ezindala ke ukuba ujonge imfezeko nceda ungabhuki ezi zindlu zangasese njengoko ungafumana izint…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Pontsian